IiLayisensi zeeNkonzo zeMali-maSigidi ezigidi
Iqabane lakho kwiHlabathi liphela kumazwe ayi-106
Ndikukhokele kwilayisensi (kunye) nakwimvume / yamaphepha-mvume efunekayo kwishishini lakho. Isikhokelo ngomyalelo wokufayilisha kwilayisensi / iifom zezicelo ezinamaxwebhu axhasayo.
Isikhokelo ngomyalelo wokufayilisha kwilayisensi / iifom zezicelo ezinamaxwebhu axhasayo kunye nokungenisa iifizi zikarhulumente kunye nokukhawulezisa inkqubo yokukhutshwa kwamaphepha-mvume okushishina.
Iqela lethu leengcali zeelayisensi likukhokela ekuhambiselweni kwezinto ezinokuhanjiswa kunye nohlaziyo, ukuze, ukwazi ukugxila kwishishini lakho eliphambili.
Abathengisi boTyalo-mali bamanye amazwe, iLayisensi yoLawulo lweeaseti, ingxowa mali yomphakathi, iLayisensi yeBhanki yotyalo-mali, ilayisensi yeSandbox, iSikimu esiHlangeneyo soTyalo-mali kunye neLayisensi yeNgxowa-mali, ukuThunyelwa kweMali kunye nokuPhathwa kweNtlawulo, iLayisensi yoMsebenzi oSekwe kwiiNkonzo (i-SBO), Umnikezeli weenkonzo zeNtlawulo, Isikimu soTyalo-mali oluHlanganisiweyo (iCis ) & Ilayisensi yeNgxowa-mali, iLayisensi yeeNkonzo eziPhakathi zeNtlawulo, ukuBhaliswa koMphathi weNgxowa-mali kunye noMlawuli wengxowa-mali efanayo, i-E-Money kunye namaZiko okuHlawula, njl.
Abasebenzi abasisigidi ngokudibanela ubudlelwane phakathi kwamanye amazwe kunye noMbutho ophethe iilayisensi banika inkxaso yelayisensi kula mazwe achazwe ngezantsi
UKUQALA KUSHISHINO okwangoku kubonelela ngezisombululo zelayisensi kula mazwe alandelayo:
Ngaphandle kokungena, sikwabonelela nangamaphepha-mvume kwezi ndidi zichazwe apha ngezantsi nakwimimandla eyahlukeneyo.
Iziqithi zaseBritish Islands zeLayisensi ye-Forex-BVI
Silawula ipotifoliyo enkulu kakhulu yabathengi bamanye amazwe abasebenza phantse kuwo onke amagunya aneshishini eliphindaphindiweyo kubo, ngolondolozo lobudlelwane bethu bexesha elide kunye nabaxumi bethu kangangeminyaka emininzi ngenxa yomsebenzi wethu ogqwesileyo, uvelwano kunye namaxabiso okhuphiswano.
Amaxwebhu esicelo selayisensi ahlukile kulawulo kunye nohlobo lwelayisensi ebelisetyenziselwe. Kodwa amaxwebhu asisiseko afunelwa ilayisensi yeshishini akhankanywe apha ngezantsi:
1. Iifom zesicelo zigcwaliswe ngokufanelekileyo kwaye zisayiniwe
2. Gcwalisa uxwebhu lwakho lwendibaniselwano. Umzekelo: Isatifikethi sokuNgeniswa, iMemorandam kunye namaNqaku oMbutho, iiRejista zaBalawuli, abaNini zabelo kunye namaGosa okanye amaxwebhu afanayo. Apho inkampani yomenzi-sicelo ingaphezu kweenyanga ezili-12 ubudala, kulawulo ezimbalwa kunye / okanye esekwe kuhlobo lwelayisensi kunye nelayisensi yeshishini eneenyanga ezi-6 ubudala, iSiqinisekiso sokuma okuhle.
3. Ubungqina bentlawulo ubuncinci bemali esemthethweni
4. Incwadana yemigaqo yokusebenza kwenkampani yakho kunye nemigaqo-nkqubo yangaphakathi kunye nemigaqo-nkqubo ebandakanya amalungiselelo olawulo oluhlanganyelweyo, ulawulo lomngcipheko kunye nemigaqo-nkqubo yokuthintela imali ngokuchasene nemigaqo, njl njl.
5. Isicwangciso soShishino kunye ne-3 ukuya kwi-5 yokuqikelelwa kwezezimali.
QAPHELA OKUQALILEYO NOKUQAPHELA
Nceda unikeze la maxwebhu alandelayo kubo bonke abalawuli, abaNini -nzuzo, abanini zabelo, abasayina abagunyazisiweyo:
Ikopi yokoqobo okanye eQinisekisiweyo yecala lokunceda / lebhanki / Umthetho osayilwayo wasekhaya (umz. umbane, amanzi, igesi, okanye umnxeba osisigxina kodwa ingeyiyo ifowuni ephathekayo, ubukhulu becala kulawulo), kungenjalo, unganikezela ngesiteyitimenti sebhanki, ingxelo yekhadi letyala okanye incwadi yesalathiso yebhanki (yomhla ngaphezulu kweenyanga ezi-3) njengobungqina bedilesi.
Ikopi yentsusa okanye eqinisekisiweyo yeleta ebhaliweyo yeBhanki (ungadluli kwiinyanga ezi-3). Phantse zonke iibhanki kwilizwe liphela zikhupha "Ileta yokuBhekisa". Unakho ukucela incwadi ekubhekiswa kuyo ebhankini, apho ubambe i-akhawunti. Ileta yesalathiso kufuneka ibonise uqinisekiso lwexesha lobudlelwane, ubuncinci iminyaka emi-2, inombolo yeakhawunti, ngokukhethekileyo ibhalansi njengalo mhla kunye nokukhankanywa "kokusebenza kwe-akhawunti kuyanelisa".
Ikopi yokoqobo okanye eqinisekisiweyo yeleta yobungqina, kufuneka ikhutshwe yinkampani eqeqeshiweyo, umzekelo, inkampani yophicotho-zincwadi, i-CPA, iFemi yoMthetho, njl.njl.
Isitifiketi sokukhutshwa kwamapolisa
Ilungelo lokukhupha ilayisensi yeshishini, nangaliphi na ixesha unokucela ukungeniswa kwamaxwebhu ongezelelweyo okanye ulwazi, ukuba, lungaqwalasela luyimfuneko.
Abalawuli benkampani abafaka isicelo kufuneka babe ngabantu abasemzimbeni kuphela.
1. Abarhwebi boTyalo-mali bamanye amazwe
1.1. Icandelo lezinto ezinokuthengiswa kwiCommunity: Ukukhetha ngeBhinary, uKamva
1.2. Icandelo lezahlulo zeMali: iLayisensi ye-Forex, iZokhuseleko / iLayisensi yokuRhweba ngeSitokhwe
2. Isikimu esihlanganyelweyo soTyalo-mali (i-Cis) kunye neLayisensi yeNgxowa-mali
2.1. INkqubo yoTyalo-mali ngokudibeneyo (i-CI S): Ingxowa-mali enye
2.2. Ingxowa-mali evaliweyo
3. Ilayisensi yeBhanki yoTyalo-mali
4. Ilayisensi yeNkonzo yeNtlawulo yeNtlawulo
5. Ilayisensi yeBhokisi yeNtlabathi (iLayisensi yeNtengiso yeRhafu)
6. Ilayisensi yoLawulo lweeAseti
1. Ukuhanjiswa kwemali kunye neNkqubo yokuhlawula
2. Ingxowa mali yomphakathi
3. Ukubhaliswa kweManejala yeNgxowa kunye noMphathi wengxowa mali
1. Iphepha-mvume lokuSebenza ngokusekwe kwiiNkonzo (i-SBO)
2. Isikhokelo sokuLayisenisa abaSebenzisi beMali
2. Ilayisensi yeZiko eliQinisekileyo leXabiso lase-Singapore (SVF)
3. Ilayisensi yeArhente yokuHamba
1. Ukhuseleko / isitokhwe, ilayisensi ye-Forex
1. Ilayisensi yokuthengisa yorhwebo
2. Umnikezeli ngenkonzo ohlawulayo
1. E-Imali & Amaziko Intlawulo
Amakhonkco aluncedo kuLayisenisi yeNkonzo yezeMali
Amagama abalulekileyo kwiLayisensi yeNkonzo yezeMali
Sizamile ukuchaza nokubonelela ngolwazi ngeenkonzo zamaphepha-mvume ezinxulumene nexabiso eliphantsi, iinkonzo ezingabizi kakhulu, iifemu zomthetho, ukufumana, abacebisi abaphezulu, inkonzo enexabiso eliphantsi, amagqwetha atshiphu, amazwe afikelelekayo, abacebisi, amagqwetha afikelelekayo, ezona nkonzo zifikelelekayo amagqwetha, abacebisi abaphezulu, abacebisi abaphezulu, faka isicelo, abacebisi, amaxwebhu afunekayo, inkqubo, ifemi yamagqwetha enexabiso eliphantsi, indlela yokufumana, amagqwetha aphezulu, ilayisensi yokufumana iinkonzo, iifizi, abacebisi abaphezulu, amaxwebhu afunekayo, iifemu zomthetho ezingabizi , Amagqwetha atshiphu, elunxwemeni, ukufumana, iiFemi zomthetho ezifikelelekayo, umcebisi onexabiso eliphantsi, umrhumo, inkqubo, iinkonzo, abona baboneleli bahle, abancinci, iilayisensi zeenkonzo zezemali, abacebisi ababalaseleyo, isicelo segqwetha elingcono, abona bacebisi batshiphu, amagqwetha aphezulu, Amagqwetha, amafemu aphezulu abameli, awona magqwetha asezantsi, awona mafemu ezomthetho, amagqwetha, ngokukhawuleza, abacebisi ngexabiso eliphantsi, abacebisi abancinci, abona bacebisi babalaseleyo, abacebisi abaphezulu, abafikelelekayo, iifemu zomthetho eziphezulu, eyona Cons Iifemant zomthetho eziphezulu zeefemu zomthetho ezibiza ixabiso eliphantsi, iinkonzo eziphakamileyo, umcebisi ogqwesileyo, umcebisi onexabiso eliphantsi, inkonzo ephezulu, amagqwetha aphezulu, indlela yokufaka isicelo, iinkonzo eziphezulu, ezona nkonzo zigqwesileyo, igqwetha elinexabiso eliphantsi, fumana, iifem zomthetho ezilungileyo, ngaphezulu Umcebisi, umphezulu, abacebisi abafikelelekayo, ixabiso eliphantsi, ixabiso eliphantsi, abacebisi ngexabiso eliphantsi, ukufumana iilayisensi, indlela yokufumana, eyona femu ifanelekileyo, indlela yokufumana, amagqwetha abiza kancinane, iinkonzo ezingabizi kakhulu, amazwe aphesheya kwezilizwe, ezona nkonzo zibalaseleyo, ifemi yomthetho ephezulu , Abacebisi abagqwesileyo, amagqwetha aphezulu, amagqwetha aphezulu, amagqwetha aphezulu, abona bacebisi bagqwesileyo, kwi-Intanethi, abona bagqwesileyo, abacebisi abaphezulu, fumana, amanqaku, amagqwetha aphezulu, iindleko, iindleko, iinkonzo ezifikelelekayo, abacebisi abancinci, ezona nkonzo zibalaseleyo abacebisi, iinkonzo zelayisensi ze, ezona nkonzo zibiza kancinane, kude nonxweme, iifemu zomthetho ezibiza ixabiso eliphantsi, zabacebisi abaphezulu.